Ogaden News Agency (ONA) – Laba maqaal oo xiisa leh
Laba maqaal oo xiisa leh
Dawarsigii Gumeysiga oo meeshii u dambaysay maraya – By Xaaji Maxamad
Maqaalkan oo dhamaystiran.
Nin waloowba baadh sababta Location-ka South Africa laguugu dilayo – By Omar jigjiga
Hadaba in Geel la dhaqdaa oo laga baayac-mushtaro ama beerahaa la fasho, kama dhib badna in laga shaqeeyo Location ku yaala South Africa. Geela waa loo guuraa goor habeen ah, waxaad halis u tahay hadaad geel dhaqdo Good,Geed qoofal ah iyo gaadmada Libaaxa. South Africana waxay ku saan go’antahay nolosha noocaas ah ee Geela lagu dhaqo, maxaa yeelay goor xunbaa la shaqeeyaa,Gacan-kudhiigle aan naxaynin oo hubaysana waad is haysaan. Hadaad gaadhi wadatana waxaa garan kara khatarta uu leeyahay nin South Africa Gaadhi kuwadaa. Sida Geela oo kalana adoo goor xun jiifa in lagugu galo way badantahay. Away wadankaad dabeecadiisa iyo dagaalkiisa garan lahayd!!!.